Greenhouse | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Anyị na-etinye greenhouses si arcs na-ekpuchi ihe onwunwe
Ọtụtụ ndị nwe ala na-achọ ịwụnye griin ha. N'ọtụtụ ọnọdụ, nhọrọ ha na-akwụsị na usoro a na-emepụta ihe na ihe mkpuchi. Enwere ike idozi ya na mbara ala ma ọ bụ na griin ha. Ihe mkpuchi dị mfe iji dochie (ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa), na etiti dị ogologo. Enwere ike ime onwe ya.
Olee otu esi ahọrọ ihe mkpuchi maka akwa
Ndị ọkachamara oge okpomọkụ, yana ndị na-amalite ọrụ a, ma eleghị anya mara otú o si sie ike ilekọta ubi ahụ. Ahịhịa, anyanwụ na ọrịa dịgasị iche iche na-egbu akụkụ buru ibu nke ihe ọkụkụ n'ọdịnihu, ya mere okwu nke ichebe ya na-aghọwanye ihe dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ị maara otú e si ekpuchi akwa iji chebe ha pụọ ​​na mmetụta ọjọọ nke gburugburu ebe obibi?
Usoro ntinye aka: otu esi ahazi irighiri mmiri
Mkpụrụ osisi na-egbuke egbuke na okooko osisi na-egbuke egbuke chọrọ nlebara anya mgbe niile. N'ime oge, nkịtị atọ na-aghọ ọrụ dị egwu. Iji nwee ike ịme mmiri na-akpaghị aka, nke doro anya ma dị mfe maka usoro mgbakọ na ime ihe. Anyị kwesịrị inye ụdị ụdị mmiri a, tụlee n'okpuru.
Ịhọrọ ihe nkiri maka greenhouses: isi ụdị griin haus ịse na nhọrọ njirisi
Enweghị azịza ọ bụla na-enweghị isi maka ajụjụ nke ihe nkiri kachasị mma maka griin haus - ụdị ọ bụla nwere ikike na adịghị ike ya. Mgbe ị na-ekpebi ihe nkiri ị ga-ahọrọ maka griin ha, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-eduzi ego iji kpuchie ihe. Ma ụgwọ ya, n'aka nke ya, ga-adabere na ma ọ bụ ihe nkiri nke a na-ahụ maka greenhouses ma ọ bụ, na àgwà na nkà na ụzụ nke ihe.
Greenhouse shading net: mere na otú e si kpuchie a griin haus
N'ime oge mgbanwe mgbanwe ihu igwe, mgbanwe nke oyi n'ime ntakịrị snow na mkpụmkpụ, na nke na-eme ka okpomọkụ ghọọ nke na-egbu egbu ma dị egwu. Nke a na-emetụta owuwe ihe ubi n'ọdịnihu. Ya mere, mmepụta nke nchịkọta shading bụ ihe omuma ọhụrụ na-edozi nsogbu ahụ. Ịhọpụta ụgbụ ntanetị maka greenhouses Ndị na-emepụta ụlọ na ndị si mba ọzọ na-emepụta nnukwu ụgbụ ụgbụ na-ekpuchi ụzarị anyanwụ.
Nhazi site na phytophthora polycarbonate greenhouses
Phytophthora bụ okwu egwu maka agronomists, ndị ọrụ ubi na ndị na-elekọta ubi. Nke a bụ ọrịa dị egwu nke na-emetụta nightshade na ụfọdụ osisi ndị ọzọ a kụrụ n'ubi, dịka strawberries ma ọ bụ kukumba. Dị ka a na-achị, osisi ndị na-arịa ọrịa na-egbuke egbuke agaghị adị mfe, nanị ụzọ ha si apụ bụ ibibi ha.
Mgbasa ventricity akpaaka nke griin haus: onye na-eme ihe ọkụ na aka gị
Ọ bụrụ na ị nwere griin ha na ụlọ ezumike gị, mgbe ahụ, ọtụtụ ga-adabere na ventilash kwesịrị ekwesị. Ndabi ikuku agha na-emepụta ọnọdụ kachasị mma maka ndụ maka osisi, na-achịkwa iru mmiri na ikuku ikuku. Ọ bụrụ na ikuku adịghị ekesa na griin haus, okpomọkụ ga-ebili ma ọ bụ daa.
Otu esi eji aka aka mee griin ga-eji oghere elu
Ọtụtụ ndị ọrụ ubi na ndị ọrụ ugbo chere banyere ịme ụlọ griin na saịtị ha. Uzo dị otú ahụ dị mfe ga-enyere aka na-eto eto na mpaghara oyi, nwee elu n'elu tebụl n'afọ niile ma ọ bụ, ọzọ, na-ere akwụkwọ nri ma ọ bụ mkpụrụ osisi dị ụkọ maka oge oyi. Na-atụle ụgwọ ụlọ griinụ gwụchara na ụlọ ahịa, ọchịchọ ịzụta ya ozugbo, ọ bụrụ na ịchọrọ ime ihe niile n'onwe gị ma nwee oge zuru oke, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike iwunye ụlọ griinụ na ụlọ gị.
Greenhouse "Tomato Signor": mgbakọ nke aka aka ha
Onye ọ bụla nke na-arụ ọrụ ubi ma ọ bụ nke na-enweghị ihe ọ maara na-akọ na osisi ọ bụla na-amalite na-eto eto ma na-agbanye ngwa ngwa na ala a na-echebe, ebe a ga-echebe ya site na ifufe, ikuku, na okpomọkụ dị ala. Ọzọ, anyị na-atụle griin haus "Signor tomato" si emeputa LLC "Krovstroy" Dedovsk. Ngwá ọrụ na akụrụngwa nke griin haus Greenhouse nke PVC "Signor Tomato" na-eji mee ka ọnọdụ kacha mma maka osisi, nke ga-enye ohere iji nweta oge mbụ, nnukwu akwụkwọ nri akwụkwọ nri na seedlings.
Ojiji nke nonwoven kpuchie ihe agrospan aghara n'ime ubi
Ka mgbalị niile a na-etinye na owuwe ihe ubi n'ọdịnihu abụghị n'efu, ọtụtụ ndị bi na okpomọkụ na ndị ọrụ ugbo na-achọ ngwaọrụ iji mepụta microclimate kacha mma. Ọtụtụ mgbe, a na-eji ihe dị iche iche na-ekpuchi ihe eji eme ihe maka nzube a, nke e kenyere maka nzube ndị a. Site n'enyemaka ha, a ga-enwe mmepe nke osisi, nke ga-eme ka ihe ubi buru ibu.
Otu esi eji aka gi eme ihe arc
Taa, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ugbo na-ekwenye na ọ dị mma ma dị mfe nke iji greenhouses. Mkpụrụ osisi toro n'ime obere greenhouses, na-egosi ezigbo utịp germination, na-eto ma na-amalite nke ọma. Tụkwasị na nke ahụ, a na-edozi osisi ndị ahụ na-eme ka ala ahụ sie ike. N'isiokwu a, anyị ga-atụle arcs ndị na-arụ ọrụ dịka ihe ndabere nke ihe eji eme: ihe ndị a pụrụ iji mee ihe na otu esi esi rụọ ụlọ obere ụlọ si na ihe dị nso.
A griin haus na-enweghị nsogbu: otu esi eme onwe-mere na-ewu nke ihe nkiri, hoop na osisi
Otu esi eto ma wewe ihe ubi n'ubi gi ma jiri aka aka gi mee onwe gi a griin ohia nke oma - i nwere ike gua n'akwukwo a, ebe anaeme ka foto nke di iche iche di iche iche maka ihe doro anya (di ka ndi nmalite). Ihe gbasara Greenhouse chọrọ maka cucumbers Iji dozie ọrụ gị na nkeji ma jiri aka gị kpoo griin ha, ị ga-ebu ụzọ mụọ ihe niile chọrọ ị ga-eme n'ọdịnihu: Ịrụ ọrụ kachasị - ikpo ọkụ.
Otu esi eme ụlọ griin dị ka Mitlayder: atụmatụ, eserese, nchịkọta
N'ihi na ọ dị irè, griin ha dị ka Mitlayder natabeghị anya mmeri site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eto eto na-eri ihe ma nọgide na-eme ya. N'ịbụ onye otu ọkachamara America maara amara na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ihe oriri, a na-akpọ griin ha aha mgbe onye kere ya. Kemgbe ọtụtụ iri afọ, Meatlider etinyewo nlezianya nyocha usoro ugbo.
Emepụta onwe ha nke griinye "Breadbox" na aka aka ha
E nwere ụdị dị iche iche na greenhouses. Otu n'ime ụdị ụdị greenhouses bụ - glasshouse "Breadbox". Ka anyị lelee ụzọ esi eji aka gị eme ihe griin "Breadbasket", site n'enyemaka nke eserese, ma chọpụta uru na ọghọm nke ụdị griin. Nkọwapụta na atụmatụ atụmatụ "Breadbox" - a griin haus, nke a na-eji eme ihe na-eto eto, na-eto eto ma na-eto eto.
Atụmatụ nke nhazi nke griin haus "nru ububa" na saịtị
Onye ọ bụla na-ebi ndụ n'oge okpomọkụ ọ dịkarịa ala mgbe ọ na-eche banyere ịzụta griin ha ma ọ bụ ime ya. Griin haus "nru ububa" nke mere polycarbonate bu ihe ndi mara oke taa. N'isiokwu anyị, anyị ga-akọwa otú e si achịkọta usoro a n'enweghị onwe ya, tụlee uru na ọghọm ya. Nkọwa na akụrụngwa Nhazi anyị na-ele anya dị ka nru ububa, nke mere ya ji nweta aha ahụ.
Atụmatụ na njirimara nke ụlọ ọrụ greenhouses
Ụlọ gri na-emepụta ihe ubi bụ ebe a na-akpọ n'ubi kpuchiri, ya bụ, ụlọ buru ibu nke e mere iji nye ọnọdụ dị mkpa maka ịkụ mkpụrụ. Ebumnuche na njirimara Jiri mpempe akwụkwọ mmepụta ihe na ugbo maka na-eto eto dị iche iche na ngwaahịa ndị yiri ya na oge ọ na-enweghị ike ibu n'ubi ma ọ bụ n'ubi.
Akụkụ nke ntinye na ojiji nke griinye "igbe nri" na saịtị ahụ
"Nri nri" nke na-enweta ihe ngosi bụ ihe griin ha, nke a na-ahụkarị site na obere obere ya, ịdị mfe nke ọrụ, na nhịahụ nke nrụnye. Ị nwere ike ịnakọta n'onwe gị ma ọ bụrụ na ị gbasoro ntụziaka dị mfe. Nkọwa na akụrụngwa Greenhouse nwere obere nha ma kwadoro maka ịmalite na nke mbụ nke seedlings, greenery na mgbọrọgwụ kụrụ.
Atụmatụ nke mgbakọ na ọrụ nke griinụ "Nọọsụ"
Greenhouse "Nurse smart girl" bụ ihe kachasị ewu ewu nhọrọ griin ụlọ ọrụ mmepụta ihe na usoro. Onye oru ọ bụla nwere ike ikwenye na uru nke usoro a site na ịwụnye "Nurse" na atụmatụ ya. Ihe omume nke griin haus, ebe kachasị mma maka nhazi, ntuziaka nkenke, iwu nchịkwa - ihe niile ị ga-ahụ na nyocha a.
Iodine na enyemaka mbu gi abughi nani maka gi, ma o nwekwara ike ibu ọgwụ di oke mkpa maka ubi gi. A na-eji ya na phytophthora na ọrịa ndị ọzọ, yana feedings. Ka anyị kwuo maka abamuru ya maka saịtị gị na banyere iji ya na-alụ ọgụ megide mbubreyo. Njirimara bara uru n'ubi na ogige Ogologo oge gara aga, enwere ike itinye nri na fatịlaịza maka osisi ndị a kụrụ n'ubi iji chebe ha pụọ ​​na ọrịa, pests, iji kpalite ha na mmepe.
Kedu esi eji aka gị mee ka griin si na polypropylene pipụ?
Ị nwere ike inye ezinụlọ gị akwụkwọ nri ọhụrụ na elu site na mmalite oge opupu ihe ubi ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ ekele nye onye inyeaka dị mma n'ụdị griin ha. N'etiti ndị bi n'oge okpomọkụ, ọkpụkpụ polypropylene na-ewu ewu, ma ị nwere ike ịhazi ya ozugbo. Ụdị dị otú ahụ ga-adị ike, dịgide, ma n'otu oge ahụ adịghị oke ọnụ.